IiNkqubo zoLwazi lweJografi: iividiyo ezingama-30 zemfundo- iiGeofumadas
NgoJanuwari, 2015 Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
I-georgocation yangaphakathi phantse kuyo yonke into esiyenzayo, sisebenzisa izixhobo zombane, yenze ukuba umba we-GIS ukhawuleze ngakumbi ukuba usebenzise yonke imihla. Iminyaka engama-30 eyadlulayo, ngokuthetha ngolungelelwaniso, indlela okanye imephu yayingumbandela othile. Isetyenziswa kuphela ziingcali zeemaphu okanye ngabakhenkethi abangakwaziyo ukwenza ngaphandle kwemephu kuhambo.
Namhlanje, abantu bajonga iimephu kwizixhobo zabo eziphathwayo, kwiimpawu zeethegi ezivela kwiinethiwekhi zentlalo, basebenzisana nemephu bengazi, kwaye bafake imeko yendawo kwinqaku. Kwaye konke oku kulungile kwicandelo le-GIS. Nangona umceli mngeni usintsokothile, kuba iyaqhubeka nokuba yingqeqesho apho uninzi lweenzululwazi lungenelela, zonke zinobunzima ukusuka ezulwini ukuya esihogweni.
Ixesha liza kufika xa ukusebenzisa ulwazi lendawo kuya kuba yinto yesiqhelo. Kwaye andithethi ngokubonisa imephu, kodwa malunga nokubiza iileya, umxholo, ukwenza i-buffer, ukumodareyitha imeko ye-3D. Ngenxa yoko, kuyakufuneka ukwahlule ukusebenziseka okukhethekileyo, kunye nokusebenzisa iselfowuni namhlanje; Akukho mntu uhlala eyingcali kuwo onke amacandelo abandakanyeka kwinkcazo yayo. Okwangoku, kuyafuneka ukuba ufunde kwi-GIS. Ngaphezulu kokusebenzisa isixhobo, qonda izinto ezisisiseko zokuhamba kwedatha yecartographic, ukusuka kwimveliso yayo ukuya ekufumanekeni kwayo kumsebenzisi oya kuthi anike ingxelo.
Kuluvuyo kum ukubonisa uluhlu lweevidiyo zemfundo malunga nothotho lweeNkqubo zeNgcaciso zeJografi. Ilungele abo bafuna ukuqonda izinto ezisisiseko, imigaqo-nkqubo, usetyenziso kunye neendlela ze-GIS, eziphuhliswe kwiividiyo ezingama-30 ezixinzezelwe kumacandelo emizobo engekho ngaphezulu kwemizuzu emi-5.
Impawu eziqhelekileyo ze-SIG
Izicelo zeJografi kwi-GIS
Sebenzisa ityala: I-Cadastre yentela
Sebenzisa ityala: Ulawulo lomhlaba
Sebenzisa ityala: UCwangciso loMhlaba
Sebenzisa ityala: Ulawulo lweengozi
Iingcamango eziqhelekileyo zesigama se-GIS
Iingcamango eziqhelekileyo ze-geography: iinkqubo zokujonga
Iingcamango eziqhelekileyo ze-geography: ukucwangcisa iinkqubo
Iingcamango eziqhelekileyo zejografi: ukubonakaliswa komfanekiso
Iingcamango zengingqi jikelele: Izinto eziphambili kwimephu
Izigaba zeenkqubo zemibala
Iinkalo zobugcisa malunga nokusetyenziswa kwe-GIS
Iimpawu zokuchaneka kunye nomgangatho
Ukwahlukana phakathi kwe-CAD ne-GIS
Idatha ifakwa kwintsimi: iindlela zokulinganisa
Ukusetyenziswa kweGPS ukumbamba i-georeferenced information
Iifoto ezisemgangathweni kunye nemifanekiso ye-satellite esebenza kwi-GIS
Ukuchazwa kwesithombe ngemifanekiso
Ukusetyenziswa kweenjini ezikude zemifanekiso ye-satellite
Izicelo kwiinjini ezikude
Uphuhliso lwezobuchwepheshe ukusetyenziswa kweGIS
Ukupapashwa kwedatha kwi-intanethi
Ulawulo lweenkcukacha zolwazi lwendawo
Ababukeli beenkcukacha zendawo
Imingeni yabasebenzi be-geomatics
Umsebenzi weengcali ze-SIG
Ububanzi bezinto zobugcisa
Ukusetyenziswa kancinci kwezobuchwepheshe kwi-GIS
Iprojekthi yesetyenzisiweyo yokusetyenziswa kwe-GIS
Iprogram ye-Intanethi ye-GIS
Uhlalutyo olucacileyo lweemephu
Ukusetyenziswa kwemigangatho kwi-GIS
Ngenxa yokuba zifumaneka mahhala, siyavuyisana Educatina.com kunye neqela lakho. Ukuba nomtya oqhelekileyo osebenzisa gwenxa okucacileyo, uphindaphinda ngengqondo eqhelekileyo kwaye ubonise amandla akhe emifanekiso ... umbhali.
Apha ungabona amavidiyo ngendlela yohlu lwadlalwayo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Kwenzeka ntoni kwi-Top40 Geospatial kwi-Twitter
Post Next Umphathi Spatial khona ukuze BricscadOkulandelayo »